Muujinta isleeg ka 76 ilaa 80 Bogga 16 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2H2O + 4H + Na2N2O2 → 2NaOH + 2NH2OH
biyaha Hidrogen Sodium hyponitrite; Aashitada hiddo-wadaha ah ee cusbada sodium hydroxide Hydroxylamine; Hydroxyamine
2 4 1 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + 4H + Na2N2O2 → 2NaOH + 2NH2OH
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo NH2OH (Hydroxylamine; Hydroxyamine)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan H (Hydrogen) waxay la falgalaan Na2N2O2 (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium cusbo)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NH2OH (Hydroxylamine; Hydroxyamine), oo ka muuqda dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na2N2O2 (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid saltdium salt), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + 4H + Na2N2O2 → 2NaOH + 2NH2OH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2N2O2 (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium cusbo)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2N2O2 (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2N2O2 (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium cusbo) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NH2OH (Hydroxylamine; Hydroxyamine)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH2OH (Sodium hyponitrite; Hyponitrous acid disodium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH2OH (Hydroxylamine; Hydroxyamine) badeecad ahaan?
Ca (OH)2 + NaHF2 → CAF2 + H2O + NaOH
kaalshiyamka hydroxide Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride kalsiyum fluoride biyaha sodium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 + H2O + NaOH
Waa maxay xaalada falcelinta ee Ca
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa CaF2 (calcium fluoride) iyo H2O (biyaha) iyo NaOH (sodium hydroxide)?
Dhacdada ka dib Ca (OH) 2 (calcium hydroxide) waxay la falgashaa NaHF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaHF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 + H2O + NaOH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaHF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CaF2 (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaF2 (calcium fluoride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee H2O (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium hydrogen difluoride; Sodium bifluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
2H2O + 2NaClO2 → H2 + 2NaOH + 2ClO2
biyaha Koloriinta sodium; Aashitada Chlorous acid cusbada hydrogen sodium hydroxide kaloriin dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + 2NaClO2 → H2 + 2NaOH + 2ClO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo ClO2 (chlorine dioxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium cusbo)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cloxnumx (koloriin dioxide), oo ka muuqda dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + 2NaClO2 → H2 + 2NaOH + 2ClO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaClO2 (Sodium chlorite; cusbada sodium chlorous acid)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee ClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh ClO2 (chlorine dioxide) alaab ahaan?
H2O + 2NAY + O3 → I2 + 2NaOH + O2
biyaha soodhiyam iodide Allena iodine sodium hydroxide Oxygen
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + 2NAY + O3 → I2 + 2NaOH + O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaI (sodium iodide) oo la falgala O3 (ozone)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa I2 (iodine) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo O2 (oxygen)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaI (sodium iodide) waxay la falgalaan O3 (ozone)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + 2NAY + O3 → I2 + 2NaOH + O2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (ozone)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
NaBrO3 + 2Na3[Cr (OH)6] → 5H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4 + NaBr
Bromate sodium; Bromic acid cusbada sodium biyaha sodium hydroxide Chromate sodium; Chromate sodium (VI); Milixda cusbada loo yaqaan 'chromic acid' Bromide sodium
1 2 5 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaBrO3 + 2Na3[Cr (OH)6] 5H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4 + NaBr
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaBrO3 (Sodium bromate; Bromic acid sodium salt) waxay la falgashaa Na3[Cr(OH)6] ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo Na2CrO4 (Sodium chromate; Sodium chromate (VI); Chromic acid disodium cusbo) iyo NaBr (sodium bromide)?
Dhacdada ka dib NaBrO3 (Sodium bromate; Bromic acid sodium salt) waxay la falgashaa Na3[Cr(OH)6] ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaBrO3 + 2Na3[Cr (OH)6] 5H2O + 2NaOH + 2Na2Crown4 + NaBr
Muujinta isleeg ka 76 ilaa 80 Page 16